किन देखेनन् रक्षामन्त्रीले डोजर चलेको ? « Loktantrapost
किन देखेनन् रक्षामन्त्रीले डोजर चलेको ?
२८ बैशाख २०७७, आईतवार १२:४७
मेचीनगर । राजनीतिक दलहरु लोकप्रियताका लागि धमाधम बिज्ञप्ती निकाल्न थालेका छन् । तर भारतले नेपाली भूमिमा २२ किलोमिटर सडक सडक खन्दासम्म नेपाल सरकार र गुप्तचर निकाय कहाँ थिए ? यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा यो प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चार दिनअघि नेपाली भूमिबाट चीन जोड्ने सडकको उद्घाटन गरेपछि मात्र लिपुलेकमा नेपाली भूमि मिचेर भारतले २२ किलोमिटर लामो सडक बनाइसकेको नेपाली नेताहरुलाई थाहा भयो ।
दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ को गुन्जीदेखि लिपुलेकसम्म करिब २२ किलोमिटर लामो सडक भारतले निर्माण गरिसकेपछि राजनीतिक दल र सरकार तातिएका छन् ।
त्रिदेशीय सीमामा अवस्थित व्यासलाई विगतदेखि नै सरकारले चासो नदिँदा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाउने दुस्साहस गरेको हो ।
‘भारतले ४ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूभागसमेत राखेर नक्सा जारी गर्नासाथ परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर असहमति राख्यो । परराष्ट्रले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि दुई पटक प्रस्ताव पनि गर्यो । तर, भारतबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएन । त्यसपछि नेपाल सरकारले पनि यो विषयमा मौनता साध्न थाल्यो । अहिले त्यो मौनताको भीषण परिणाम देखिएको छ ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले केही महिनाअघि लिपुलेक क्षेत्रको हवाई र स्थलगत अनुगमण गरेका थिए । १२ बर्षअघिदेखि निर्माण थालिएको सडक रक्षामन्त्रीले किन देखेनन् ? अहिले सामाजिक सञ्जालमा यही प्र्रश्न सोध्न थालिएको छ ।
हवाई र स्थलगत अनुगमणमा पुगेका पोखरेलले न सूचना पाए, न त नेपाली भूमिमा भारतीय डोजर चलेको देखे । अनुगमणका नाममा अनुगमन गरेर मात्र उनी फर्केको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।
रक्षामन्त्री पोखरेल गत फागुन ५ गते दार्चुला सदरमुकामबाट नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर कालापानी क्षेत्र हेर्न गएका थिए। तर उनी सवार हेलिकोप्टर कालापानीबाट करिब १५ किलोमिटर वरैबाट फर्किएको थियो।
रक्षामन्त्री कालापानीमा तीर्थयात्रा गएका हुन् ?
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले भारतले नेपाली भूमि मिचेको प्रसंगगमा रक्षमन्त्री ईश्वर पोखरेलको भूमिबारे प्रश्न उठाएका छन्।
भारतले नेपाली भूमि लिुलेक क्षेत्रमा सडकमार्ग बनाएकोबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई आइतवार प्रतिनिधिसभामा प्रश्न गर्दै थापाले रक्षामन्त्री पोखरेलको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएका हुन्।
भारतले सन् २००५ देखि नेपाली भूमिमा बनाइरहेको सडकसमेत नदेख्ने रक्षामन्त्री कालापानी क्षेत्रमा पुगेकोबारे व्यंग्य गरेका हुन्। उनले हेलिकोप्टरबाट पनि आफ्नो भूमिमा भारतले बनाएको सडक नदेखेको भन्दै रक्षामन्त्री पोखरेल कालापानीमा तीर्थयात्रा गर्न गएको हुन सक्ने कटाक्ष गरे।
‘रक्षमन्त्री कालापानीमा तीर्थयात्रा गर्न गएका हुन्? होइन भने नेपाली भूमिमा बनिरहेको सडक उनले किन देखेनन्?’, थापाले सोधे, ‘सडक उद्घाटनपछि मात्रै देख्ने यो कस्तो तरिका हो? नेपालले सधैँ पछुताउनु मात्रै पर्ने हो?’
नेता थापाले सरकारले अब नेपालको भूमि तिमीलाई प्रयोग गर्न दिँदेनाँै भन्न सक्नुपर्ने बताए । ‘भारतको दादागिरी र चीनको न्यानो स्वागतको प्रतिरोध गर्न कांग्रेस तयार छ’, उनले भने, ‘नेपाली भूमि रक्षाका लागि दह्रिलोसाथ उभिन हामी तयार छौँ।
ओली र दाहालको संयुक्त वक्तव्य
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै निर्माण गरेको सडकले नेपालको सार्वभौमिकताको अवमूल्यन गरेको जनाएको छ।
नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सडक निर्माण गर्ने कार्यले सार्वभौमिकताको अवमूल्यन गरेको जनाएका हुन्। सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयको संयुक्त हस्ताक्षरमा शनिबार साँझ जारी विज्ञप्तिमा भारतको कदमप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।
सम्पूर्ण मानव समुदाय कोरोनाको महामारीविरुद्ध जुधिरहेका बेला भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरेको नेकपा अध्यक्षद्वयको ठहर छ । नेकपाका तर्फबाट जारी विज्ञप्तिमा सो इलाकामा सडक निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र समस्यालाई थप जटिल नबनाउन भनिएको छ ।
नेकपाले सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदी पूर्वको भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको उल्लेख गरेको छ। नेपालले पटकपटक सचिव स्तरीय वार्ता मार्फत् सीमा विवाद सुल्झाउन गरेको पहललाई भारतले वेवास्ता गरेको नेकपाको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा दुई देशबीचको लामो सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई ख्याल गर्दै कुटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट सीमा समस्या हल गर्न सुझाइएको छ। साथै नेकपाले तत्काल सडक निर्माण कार्य रोक्न माग गरेको छ। सीमा क्षेत्रमा थप जटिलता उत्पन्न हुने कुनै कार्य नगर्न समेत भारतलाई नेकपाले आग्रह गरेको छ।